Materazzi oo isku sawiray taalada loo dhisay hertidii uu 2006dii ku dhuftay Zinedine Zidane. - Caasimada Online
Home Warar Materazzi oo isku sawiray taalada loo dhisay hertidii uu 2006dii ku dhuftay...
Materazzi oo isku sawiray taalada loo dhisay hertidii uu 2006dii ku dhuftay Zinedine Zidane.
Marco Materazzi ayaa kusoo bandhigay Bogiisa Twitter-ka isagoo sal saaran taalada loo dhisay hertidii uu ku dhuftay Zinedine Zidane taasoo dhowaan laga dhisay magaalada Paris ee caasimada dalka France.
Xasuusyo caan baxay ayaa u dhexeeya labada ciyaaryahan taasoo ku dhex martay Finalkii koobka aduunka ee 2006dii, waxaana hertidii Zidane uu ku dhuftay daaficii dalka Italy loo sameeyey taalo shan mitir dhirirkeedu yahay oo ku taalada Xarunta Pompidou, ee magaalada Paris iyadoo daaha laga qaaday bishii September ee sanadkaan.
Qaabka waxaa sameeyey Aartiiste reer Algeria ah oo magaciisa la yiraahdo Adel Abdesseme, wuxuuna ula dan lahaa in shilkaan caan baxay lagu xasuusto xidigii hore ee Real Madrid Zidane.
Si kataba, Materazzi, ayaa si maadeys ah isugu soo sawiray halkaas wuxuuna sal saartay labada cagood ee lugaha loo taagay taalada, isagoona ka dib kusoo diray bogiisa bulshada ee Twitter-ka
“Qiyaas halkee ayaan joogaa?” ayuu daaficii hore ee Inter ku Tweet gareeyey akoonkiisa.
Materazzi ayaa dafiray inuu aflagaadeeyey Zidane walaashiis intii ay socotay qeybtii hore ee ciyaartii Finalka ee ka dhcday Berlin, markaasoo ay Italy koobka ku qaaday goolku laadyo.
W/Q: Ahmed Jaangoan
Caasimada – Mogadishu.